Abụọ ndị ọzọ na-emebi nnwere onwe | Site na Linux
Abụọ ọzọ na-emebi nnwere onwe
obi ike | | Noticias, Ndị ọzọ
N’oge na-adịghị anya, ọ bụ ihe ejiji iji mebie nnwere onwe nke ndị mmadụ site na ụlọ ọrụ nke ngwaahịa ịntanetị na sistemụ arụmọrụ, ma ọ bụghị site n’igosi koodu ahụ, ma ọ bụ ịmanye gị ịnweta ihe ị na-achọghị, wdg.
Companlọ ọrụ nke ejiji a bụ Microsoft, Apple, Canonical, Facebook o Google / YouTube, n'ihi ọtụtụ ihe m na-agaghị akọwa ebe a.
Ọ dị mma Gravatar y WordPress (blọọgụ) bụ akụkụ nke a, gịnị kpatara ya? Dị mfe:
Ha anaghị ekwe ka ihichapụ akaụntụ gị
Ha na-ejikọta ibe ha imi, dị ka Gmail na Youtube
N'ihe banyere WordPress, ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ email jikọtara na ọrụ abụọ ahụ, ị ​​nwere ike ịza ajụjụ na blọọgụ na wordpress.com ngalaba na akaụntụ WordPress gị.
Na tiori, okwesighi ibu ihe ojoo mana na ikpe dika m o bu (oburu na obu oge obula ...):
Na blọọgụ m gara aga, ejiri m akaụntụ a, nke Gravatar, mana emesịrị m tinye ya dị ka nke abụọ ka m ghara iji Gravatar na blọọgụ n'ihi otu ihe zuru ohi n'aka m.
N'ihi ya, ọ dịghị ihe dị iche, mana ihe ijuanya m na-abịa mgbe ụbọchị ole na ole gara aga m gbalịrị ịza ajụjụ na blog na ngalaba WordPress, enweghị m ike ịza ajụjụ.
Taa, m na-achọ azịza ya nke ọma, m banyere WordPress, mana ọ naghị ekwe ka m tinye Gravatar nke akaụntụ nke abụọ, naanị nke mbụ, ma ọ bụrụ na m gbanwee akaụntụ m nke abụọ na isi, a ga-eji Gravatar na blọọgụ ọzọ.
Nke a adịghị njọ dịka ụlọ ọrụ ndị ọzọ, mana m ga-enye usoro ndụmọdụ:
Emebela blog na WordPress
N'ihe banyere ime nke a, jiri akaụntụ abụọ dị iche, otu maka blog na otu maka saịtị ndị ọzọ, iji nwee ike ịza ajụjụ n'ihe banyere ịhapụ blog. N'okpuru echiche ọ bụla a ga-ejikọ akaụntụ mpụga na akaụntụ Gravatar na blọọgụ ahụ, mana ọ ga-eji nke dị iche
Ahapụla inye ezigbo aha gị na profaịlụ Gravatar
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Abụọ ọzọ na-emebi nnwere onwe
Ehem, ikeghi blog na wordpress? Ma gịnị ka anyị na-eme, anyị na-eji blogger XD's poop poop?
Fuck onwe gị, mgbe ahụ ị na-eziga ha niile ka ha na hahahaha.
Echere m na ị pụtara naanị blọọgụ WordPress.com, nri? Ọ bụrụ otu a, ekwenyere m nke ọma. Ọzọkwa ikpo okwu dị oke oke. Ihe kachasị mma na enweghị mgbagha bụ WordPress na nnabata ya, ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ma ọ bụ na ị chọghị ịkwụ ụgwọ maka nnabata ma jiri otu nyiwe n'efu, ị ga-ama na ọnụ ala na-adịkarị ọnụ.
Banyere isi ihe ị kwuru, m na-ahọrọ nọmba 2, nke akaụntụ ndị ejikọtara n'ike. Ọ bụ otu n’ime ihe m kpọrọ asị banyere ọrụ ịntanetị. N'ihe m nwere nsogbu ahụ bụ Google Plus, n'ihi na m meghere akaụntụ m na email anaghị m eji ma enweghị m ike ịgbanwe ya n'ihi na ọ bụ site na Gmail ma ha abụọ ga-anọgidesi ike maka ndụ n'ihi na Google chọrọ ya. Ndị ụlọ ọrụ kwesịrị ịmụta ịghara iji ike jikọta ọrụ ndị nwere onwe ha.
Maka ihe a niile nke kachasị mma ga-abụ n'efu na enweghị usoro ọzọ. 🙂
Gịnị na-eme ka ị na-eme Canonical?
Zaghachi Cris Duran
Achọrọ m ịma otu ihe ahụ!
Kedu ihe Canonical na-eme, ọ ga-amasị m ịmara!
Ọ bụrụ na nke ọ bụla dị ka ihe ọhụụ na ihe niile haha.
Ọfọn ebe ọ na-aga:
Nke a abụghị ọchịchị onye kwuo uche ya: Akara Shuttleworth.
Ọ dabere na ebe ịlere ya ...
Ihe m na-ekwu maka usoro nke nnwere onwe n'ozuzu ya abụghị ịmanye ihe ọ bụla.
N'ihe banyere Canoni $ oft, ihe ha na-eme bụ imebi ụkpụrụ nke GNU / Linux site na ịghara itinye obodo ahụ n'uche.
Ihe dị ka igbe ntụnye aka elekere 24 nke nwere ike ijikọ onwe ya, ikekwe na nkesa ọ bụla mmadụ ma ọ bụ ụfọdụ anaghị eme mkpebi maka gị mgbe ị na-achọ nchịkọta iji tinye, nkwado na ezumike ahụ? Canonical bụ ụlọ ọrụ na enwere ike ijikwa ya ọ masịrị ya dịka iwu ya siri dị, ọ bụghị n'ihi na ọ na-ere ngwaahịa GNU / Linux ma ọ bụrụ na ọ ga-agbaso ụkpụrụ "GNU / Linux".
Ọ naghị ege ntị ma ọ bụ nwee igbe ntụnye, na-adịkarị n'etiti etiti, mana ihe na-emegide ụkpụrụ nke GNU / Linux bụ Ana m eme ihe m nwetara site na aghụghọ, onye ọ bụla tara onwe ya amaraworị.
Ha nwere ike ịme ntuli aka iji hụ ihe ndị ọrụ chọrọ.
Ihe ị na-ekwu: "Ana m eme ihe m nwetara site na aghụghọ, na onye ọ bụla tara tara ama", gịnị ka o nwere? Ọ bụ amụma azụmahịa, dị ka nke ọ bụla ọzọ, ọ nwere ike ịbụ karịa ma ọ bụ na-erughị ya, dabere na ọdịmma gị. M kwughachiri, eziokwu ahụ bụ na ha "na-eji Linux" apụtaghị na ha abụkwaghị ụlọ ọrụ nzuzo nke a na-achịkwa dịka ha masịrị ha, ịgbaso ụkpụrụ ndị ọzọ. Ọ bụ mkpebi gị. Ọnụ ego sitere na ya, ma ọ dị njọ ma ọ bụ na ọ bụghị, ekwesịrị inye ha n'aka ndị ọrụ ha, ọ bụghị nke anyị na-anaghị eji nkesa ahụ.
Ọ bụ amụma ụlọ ọrụ, mana nke a bụ mpaghara siri ike na nke ahụ.
Ọ bụrụ na ọ bụ mpaghara ọzọ na-abụghị GNU / Linux, BSD na sistemụ ndị ọzọ emepe, mgbe ahụ nsogbu agaghị adị.
N'ihe banyere GNU / Linux, iwu a megidere ụkpụrụ ya.
Kedu ihe ngwanrọ ngwanrọ n'efu ọ bụ, ihe e kere eke?
N'agbanyeghị. Enwere m akaụntụ WordPress, jikọtara na email nke m na-ede na ọ naghị amanye m ịbanye ebe ọ bụla iji nwee ike ịza ajụjụ ọ bụla blog blog
M ka m ọ bụla blog na ngalaba .wordpress.com ee.
Na Ubuntu ... Aaay gini mania jiri ya.
I nwere Mania. Ruo mgbe ị mụtara na SL enweghị ọchịchị onye kwuo uche ya, ọ bụrụ na ọ bụghị meritocracy, agaghị m akwụsị 😛
Gagharịa na blọgụ MuyLinux ma ọ bụ Malcer ma gụọ nkọwa niile m nyere n’isiokwu a, adị m umengwụ ịkọwa ya.
M na-eji Blogger ma ọ bụ ụzọ atọ n'ụzọ atọ. Anyị na-ebi na afọ dijitalụ, ụgwọ ịkwụ ụgwọ bụ nzuzo gị. Site na ,ntanetị, ụlọ ọrụ na gọọmentị nwere ike ịma ihe niile ha chọrọ gbasara gị, ma ị mepụtara profaịlụ ma ọ bụ na ị meghị. Ọbụna ISPs na-edebe akụkọ ihe mere eme gị ruo ọtụtụ afọ. Nnukwu Nwanne na-ahụ gị. Ma ọ dịkarịa ala, ị nwere ike ịnye data ụgha mgbe niile, mana ọ na-esiri m ike ịgbanahụ onyinyo ndị dị otú ahụ.
Enwere m ọtụtụ blọọgụ na WordPress ma enweela m ọtụtụ ndị ọzọ na m ga-aga n'ihu na-enwe ha na WordPress maka ndụ
Blogger na-egbu mgbu (ọ bụghị iji kọwaa ọkwa ọzọ ka njọ) ịnwe blog nkeonwe, amaara m, enwere m blog na blogger na enweghị atụnyere WordPress
Have nwere ihe akaebe na nnukwu saịtị na blọọgụ na-agba ọsọ n'okpuru WordPress you nwere ike iche n'echiche saịtị a na Blogger? ọ ga-abụ ihe na-adịghị mma ...
Site n'ụzọ, dozie sistemụ "operative" 😉
Kpachara anya, Blogger nwere atụmatụ zoro ezo nke ọ na-amaghị onye ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, na mbido afọ gara aga Google nọ na-agbanwe tweaking Amaghị m ihe na sava ahụ na ọtụtụ ntinye na nkwupụta furu efu, n'abalị. N'oge na-adịbeghị anya, ọ tinyela ntinye ntanetị na blọọgụ, na obere bọtịnụ edezi nke gosipụtara na mbụ maka mgbanwe ngwa ngwa nke ederede, ugbu a ha apụtaghị ma ọ bụrụ na ị gbakwunye NCR na adreesị weebụ ... Ka o sina dị, ana m eche maka ịkwaga ka WordPress, eziokwu ga-agwa.
Chei na anya m enyochala edemede ahu, o gha aghaghi ibu afọ.
Agbanyeghị saịtị a dị iche, m na-ekwu ndị bụ .wordpress.com
Afọ ole na ole gara aga, achọrọ m ịmepụta blog ... echere m Blogger n'ihi na ọ sitere na Google, Google dịkwa elu karịa ewu ewu karịa WordPress, mana ... (ma ka bụ) nhọrọ kachasị mma nke ndị niile m hụworo.
Ugbu a, obi ike katọrọ WordPress.com dị ka ndị dị otú ahụ na B andGH WordPress WordPress.org, nke mbụ bụ WP blogging system na nke abụọ CMS dị ka ndị dị otú ahụ.
Ee, mgbe ị dị obere hahahahaha.
Ebe m kwuru "akwa" m pụtara "nnukwu"
Ọ gbara m ọkụ [/ chavo del 8 mode]
Elela irighiri ahihia na anya onye ozo, kama na ntuhie nke gi hahahahahaha.
Ndewo, Obi ike. Daalụ maka ozi ahụ. Obere nkọwa: ị ga-ezipụta na ọ bụ WordPress.com, iji zere ọgba aghara na WordPress.org
Aga m etinye ya, mana bia, ọ bụ ịde blọgụ
Ekwenyere m ichedo nzuzo, enweghịkwa m ihe ọ bụla megide Nick (utu aha), mana m na-ahọrọ iji aha m, enweghị m ihe m ga-ezo ...
N'aka nke ọzọ, ka anyị ghara ichefu netwọkụ mmekọrịta, juputara na data nke aka anyị.
Ọ bụ ya mere m ji kwuo ihe Facebook.
Enwebeghị m mmasị na aha ahụ n'ezie, enweghị m ntụkwasị obi itinye ya ebe ahụ.
Akpọrọ m asị na m ga-ebu aha ikpeazụ m na ịntanetị… ¬_¬… Google wepụrụ G + m oge gara aga n'ihi na m tinyere aha m ma ọ bụghị aha m, nke a bụ ihe zuru ezu iji ghara iji ezigbo anya hụ ya dị ka ọ dị na mbụ.
Ọfọn, na blọọgụ ụfọdụ ọ na-apụta, yabụ ọ bụrụ na ị masịghị ya, wepụ ya ozugbo enwere ike.
Jose Miguel, nke ahụ dị mma, mana ọ bụghị nke ukwuu ma ọ bụrụ na ịchọrọ itinye aha nna gị, ọ wee bụrụ na ọ bụ naanị gị na Spain ka ị nweta ha .... mee mkpesa banyere ihe dị na weebụ ma mgbe ụbọchị abụọ gacharala na ọ bụ gị xDD
Banyere isiokwu ị ziri ezi, ọ dị m ka enweghị nnukwu nkwanye ùgwù maka ndị ọrụ na ịnweghị ike ihichapụ akaụntụ WordPress, n'eziokwu, echeghị m na ọ siri ike ịgbakwunye bọtịnụ ihichapụ ya, ma ọ bụ na ha na-ehichapụ onwe ha dị ka Microsoft
Mana ekwenyekwara m Obi ike, na ọdịiche dị na mmebi nke nnwere onwe dị n'etiti Microsoft, Apple, Google, Twitter, Facebook na Canonical dị ukwuu, onye nke mbụ na-eme ya n'atụghị egwu na mgbe niile na nke ikpeazụ gosipụtara naanị ọnọdụ ha dịka ụlọ ọrụ, nke m maara. Canonical enweghị ọnụ ụzọ na Ubuntu, ma ọ bụ na-anakọta data nkeonwe site na ndị ọrụ nke distro ya na-enweghị nkwenye, ma ọ bụ ihe ndị dị ka nke ahụ, ọtụtụ, Ubuntu Otu, mana anaghị m eji ya ma ọ bụ na m bu n'obi ime ya ...
Na ụlọ ọrụ ndị ọzọ m na-ekwu na ha na-emebi nnwere onwe, ọ bụghị n'otu ụzọ ahụ, ụfọdụ anaghị ekwe ka ihichapụ akaụntụ, ndị ọzọ na nke a Nke a abụghị ọchịchị onye kwuo uche ya, ndị ọzọ na-enweghị ịhapụ koodu, wdg.
Echere m na ị nweghị ntakịrị echiche nke "nnwere onwe" na "echiche". Inwere ike inwere onwe gị ịme, iche echiche na ikwu ihe ọ bụla ị chọrọ. O b ugh i na i ghagh i ichebara echiche gi echiche, o nwegh i ohere inwere onwe g i. Ọ dị mkpa, anaghị m agọnahụ ya, na n'ọnọdụ a ihe onye ọrụ chọrọ chọrọ ka a nụrụ. Agbanyeghị, enweghị ike inye onye ọ bụla otu mkpa ahụ. Ka anyị hụ, ọbụnadị n'otu ọchịchị onye kwuo uche ya ka emezuru.
Gaa na Rajoy gwa ya: Hey nwoke, echere m na i kwesiri ime nke a iji melite oru. Ka anyị hụ ma nwa amaala ọ dịkarịa ala ị nwere ohere ịbịaru gị nso. Ma lee, maka ọtụtụ n'ime ihe ndị ahụ ị nweghịdị onwe gị na ọchịchị onye kwuo uche ya. Are nweghi onwe gị, naanị n'ihi na ị na-agagharị na mpaghara ala na ikike site n'aka ụmụ amaala, ịgwa nke a ma ọ bụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọ bụ nwa nke ***, ọbụlagodi na ị bụ eziokwu.
Otu ihe a ị nweere onwe gị n'ihi na a na-asọpụrụ nnwere onwe gị bụ isi, mana echela na ọ bụ ya mere ị ga-eji jụụ na-arịọ maka olu na votu mgbe enwere ahịrị doro anya nke otu na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-agbaso (ndọrọ ndọrọ ọchịchị na sayensị kọmputa, dịka ọmụmaatụ)
Ochichi onye kwuo uche ya apụtaghị nnwere onwe nke nwa amaala, ma ọ bụ na nke a nke onye ọrụ. Naanị na ọ na-eche na ọ siri ike (ịgha ụgha ikwu eziokwu). Ọ bụrụ na ị ga-eduzi ọrụ dị ka Ubuntu ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ, ị ga-achọpụta na ị nweghị ike ịnọgide na-enwe echiche mepere emepe nye olu niile chọrọ ikwupụta echiche ha, nke ahụ na-abanye n'ọgba aghara. Ọ bụrụ na ọ bụ maka ọtụtụ ndị linuxers, ihe niile ga-abụ nkasi obi na ọnọdụ njedebe, wee bịa, ọ bụghị ya.
N'ime arụmụka gị banyere isiokwu a nke ị nyere ebe a, ọ dị m mkpa ka ị kọọ ahụmịhe gị, mana na ọrụ ebere na nkwanye ùgwù m ga-ekwu na n'ihu echiche gị nke nnwere onwe, ị dị ka enweghị nkwekọ.
Anaghị m ekwu na ị ga-eburu n'uche echiche nke onye ọ bụla, mana jụọ ma hụ ihe ọtụtụ ndị na-ekwu, ma ọ bụ mee nyocha, nke dị n'usoro.
Na tiori, na ọchịchị onye kwuo uche ya ị nwere ike ịme ntuli aka, nke ihe niile dị ka ntuli aka nke na-ahụ ọtụtụ ndị a ga-ahọpụta, n'ihe banyere ịme ntuli aka maka onye isi ala.
Ọ bụghị ajụjụ nke iwere ya gabiga oke, mana ụlọ ọrụ ndị a were ya, yana kwa maka njọ, na etiti etiti iji chekwaa.
M na-eche ma ọ bụrụ na enwere ụzọ ọzọ maka gmail nke na-asọpụrụ nzuzo
Bilie enyi, m na-eji ya, ọ dịkwa m mma 😉
ekele m na-edetu
Ọ bụrụ na ịchọrọ koodu ịkpọ oku na ọrụ ahụ, gwa m ka m nye gị 😉
Nke abụọ »
You chọrọ koodu ịkpọ oku abụọ?
zitere m koodu ahụ scow.in@gmail.com
Emeela bro, zitere koodu 😉
Daalụ, ka anyị lee ma m ga-ahụ oku ọzọ
Ga-enwe koodu nke ndị ahụ. Ọ bụrụ otú ahụ, ị ​​nwere ike iziga m okerbi@outlook.es
Zaghachi ka okerbi
Ma ọ bụ GMX
Ọ bụghị nke ukwuu, na ịrị elu ọ dịghị iwu nzuzo nzuzo nke ọtụtụ peeji, mana na GMX ugbu a ee, na eziokwu, n'ihi ọnọdụ ha tinyere na njirimara ha, ị nwere ike ịme otu n'ime ndị ọzọ (Windows Live Hotmail, dịka ọmụmaatụ) na ị gaghị achọpụta ihe dị iche ọzọ.
Ọ bụrụ na enyere m nhọrọ n'etiti iji ọrụ ndị a (nke bụ ihe ọnụ ọgụgụ ka ukwuu ugbu a) na iso ndị ọzọ na-ekwurịta okwu (na-ekwu okwu ihu na ihu), m ga-ahọrọ ịghara iji ọrụ dịka netwọkụ mmekọrịta dịka skype, msn, wdg, n'agbanyeghị Nke ahụ ga-apụta na m nọpụrụ iche ma ọ bụ ghara ịbụ onye na-ewu ewu; Agaghị m eji nke ọ bụla, ha niile na-etinye ihe na atumatu nzuzo ha anaghị amasị m, ha na-ehicha aka ha dịka ụlọ ọrụ ọ na-ekwupụta n'ụzọ doro anya na ọ bụrụ na ị jiri ọrụ ndị ahụ, ị ​​nweghị ụdị ike ọ bụla gbasara data ị tinyere n'ime ha, mana ebe ọ bụ na ndị mmadụ anaghị agụrụ ha ya, mgbe ahụ ọ na-eju ha anya ma ha jiri ya mee ihe ha chọrọ.
Ọ bụrụ na ọ bụ ihe na-ahọrọ ... M na-ahọrọ m onwe m na ihe nkesa email hehehe 🙂
Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na mmadụ anwa anwa tinye otu esi aga-esi eme ya 🙂
Ga-achọ ihe nkesa (Raara onwe ya nye ma ọ bụ VPS), ngalaba, na ngalaba dị elu nke netwọk, ọrụ na os dịka such
E nwere ọtụtụ ụzọ isi mee ya, ha dị ọtụtụ ... ụfọdụ dị mfe, ndị ọzọ na-emejọ complex
A na-emebi nnwere onwe dara ogbenye mgbe niile.
Ihe niile na-eme m ...
Chịrị ọchị, ọ dị mma na ị na-eme mkpesa banyere ihe ndị ọzọ.
Oleekwa ihe dị njọ n’ikwu eziokwu? Onye ka ekwenyere na ochichi onye kwuo uche ya na akụkụ ụfọdụ nke ụwa ụwa bụ na ọ naghị emetụta eziokwu, na nkenke, ajụjụ a bụ ịta ụta maka ihe ọjọọ niile nke ụwa dịka ọ dị na mbụ Microsoft, CIA, KGB na na na ogologo ETC
Etu esi achọ nchọ gị na Firefox
Mepụta ihe nkesa igwe ojii nke gi na OwnCloud